Mana Oromoo Swiss: Dache yoo dubbattu akka namaa taatee
Dacheen Oromia guddaa dha dhaamsi ishee,
Nama gurra qabuuf kan Waaq isa gorsee;
Seera isa ganamaa iddootti deebisee,
Nama ittiin buleef isheen haadha isa deesse.
Barreessaan kunillee kan qaroon kee qaraa,
Bultii rabbii beektu akka jaarsa araaraa;
Fayyaa keetiin jiraadhu hari baraa bara,
Gorsa guddaa himtee kan qabu daraaraa.
Harka fuune obbo Abera,
Fuula barreffama kee kana yeroo hedduun dubbiseera. Ergaan ati saba keenyaaf dabarsaa jirtu kun seenaa guddaadha. Keessumattuu walaloon kee kun ergaa guddaa qaba. Kanaaf kadubbisee qalbeeffatuuf dhaamsa gaarii ta'uu isaa siif ibsaa, fuuladurattis jabinaan akka itti fuftuus abdiin qaba. Oromiyaan ka Oromoot! Galatoomi.
Ergaa seenaa fi aadaa amantee fi tokkummaa barsiisani fi cimsan hedduu walaloo of keessaa qabdu akkasii kana barreeffama akkasiin argee dubbisuu kootiif hedduun itti gammade. jabaadhu. Gammachiisaa barsiisu. Kan darbee fi kan itti jirru nama hubachiisa. Jabaadhu jabaadhu siin jedha.
Afaan Oromootiin barreeffama barreessuun bifa adda addaatiin dhiheessuun guddina afaan keenya diinnonni keenya owwaalle jedhanii dhaadachaa turanii guddisuuf qooda guddaa qaba. Namuu seenaa fi barumsa adda addaallee afaan ofiitiin baruu fi dubbisuu irra fedha. Kanaaf tattaaffiin akkasii kun bifa fedheenuu daran babal'achuu fi jabaachuu qaba. Walaloonillee bifa barreeffama mi'aawaa dhaan dubbiftoota hawwatee ergaa dabarsuu barreeffama danda'u waan ta'eef haalli akkasiillee babal'achuu qaban jedha.
Ergaan dache dabarsite kun nama caqaseef gorsaatii galatoomi.